Ogaden News Agency (ONA) – Gooni-Ugoosadka Koonfurta Yemen oo Inta Badan Cadan Lawareegay.
Gooni-Ugoosadka Koonfurta Yemen oo Inta Badan Cadan Lawareegay.
Gooni-Ugoosadka Koonfurta Yemen ee la baxay Southern Resistance Forces (SRF) ayaa la wareegay saldhigii ugu muhiimsanaa ee militariga oo ku yaal magaalada Cadan oo hada ah xarunta Kumeel Gaadhka ah ee dowlada Yemen.
Dagaaladii shalay ayaa ahaa kuwo kusoo beegmay xili Isbaheysiga Sacuudiga uu hogaamiyo uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Ciidamada ka amar qaata Madaxweyne Cabdulrabi Mansuur Hadi iyo maleeshiyaadka ay horey xulafada u ahaayeen ee kasoo jeeda koonfurta Yemen.
Xoogaga Koonfurta oo iyagu taageero ka helaya dowlada Imaaraatka ayaa todobaadkii hore maalmo u qabtay Madaxweyne Hadi in uu xilka ka qaado Raysalwasaarihiisa iyo Golaha Wasiirada oo ay ku eedeeyeen musuq maasuq, iyagoo sheegay in Xukuumadaasi aysan matelin rabitaanka shacabka koonfurta ku dhaqan gaar ahaan magaalada Cadan oo hada fadhiisin u ah dowlada.
Iska hor’imaadka ayaa bilowday kadib markii Madaxweyne Hadi oo ku sugan dalka Sacuudiga uu ku gacansaydhay codsiga xulafadiisa koonfurta. Xoogaga Koonfurta ayaa shalay galinkii dambe la wareegay Saldhiga Militariga ee Guutada 4aad oo ku yaala degmada Darsaad ee magaalada Cadan, xubno ka tirsan Dowlada Yemen ayaa ku eedeeyey Imaaraadka in uu gacan siiyey maleeshiyaadka xeradaasi qabsaday.
Diyaarad dagaal oo ay leedahay dowlada imaaraadka ayaa la sheegay in ay duqeysay saldhiga ciidamada dowlada kahor inta aysan halkaasi la wareegin maleeshiyaadka u dagaalamaya gooni isu taaga koonfurta Yemen. Inta badan magaalada Cadan ayaa hada ku jirta gacanta Xoogaga koonfurta oo iyagu ku hareeraysan Qasriga Madaxtooyada Cadan oo ay hada ku sugan yihiin Raysalwasaaraha iyo tiro kamid ah Wasiiradiisa.